HomeWararka Ciyaaraha MaantaWararka Suuqa kala iibsiga: kuwa ugu danbeeyay ee laga qoray Lampard, Flick, Kane, Haaland, Sancho, Romero, Parker, Berge, Camavinga
May 13, 2021 Wararka Ciyaaraha Maanta, Suuqa kala iibsiga, Wararka Wargeysyada 0
Tababarihii hore ee Chelsea Frank Lampard ayaa u soo muuqday hogaamiyaha tartanka loogu jiro bedelka Roy Hodgson ee Crystal Palace . Tababarihii hore ee England Hodgson qandaraaskiisu wuxuu dhacayaa dhamaadka xilli ciyaareedkaan. (Telegraph)
Barcelona ayaa xiriir la sameysay wakiilada tababaraha ka tagaya Bayern Munich Hansi Flick, iyadoo shaki uu ku sii kordhayo mustaqbalka tababaraha haatan ee Ronald Koeman. (ESPN)
Tottenham Hotspur iyo weeraryahanka reer England Harry Kane, oo 27 jir ah, ayaa ku sii negaan doona kooxda reer London haddii uusan Pep Guardiola ka dalban Manchester City inay la soo saxiixato xiddiga Borussia Dortmund Erling Braut Haaland, oo 20 jir ah (Sun)
Madaxa fulinta ee kooxda Borussia Dortmund Hans-Joachim Watzke ayaa sheegay in Haaland uu kooxda sii joogi doono xilli ciyaareedka dambe. (ESPN)
Xiddiga garabka uga ciyaara kooxda Dortmund iyo xulka qaranka England ee Jadon Sancho oo 21 jir ah ayaa wakiilkiisa ku riixaya in uu ku biiro kooxda Man United kadib markii mid ka mid ah uu ku fashilmay xagaagii hore. (Manchester Evening News)
Manchester United ayaa xiiseyneysa daafaca dhexe ee reer Argentina Atalanta ee Cristian Romero, oo 23 jir ah, kaasoo ku biiraya daafaca kooxda Lille ee 21 jirka ah Sven Botman iyo 22 jirka Sevilla ee reer France Jules Kounde oo ku jira liiska kooxda Premier League. (Sky Sports)
Tababarihii hore ee Bournemouth Eddie Howe ayaa ogolaaday inuu noqdo tababaraha cusub ee kooxda Celtic . (TalkSport)
Tottenham ayaa qarka u saaran inay magacowdo booska tababarahooda banaan maalmaha soo socda. Ciyaaryahanka kooxda Fulham ee Scott Parker ayaa ku jira liiskan laakiin kooxda ayaa ka quusatay rajada ay ka leedahay soo jiidashada macalinka kooxda Leicester City Brendan Rodgers. (Footballinsider247)
19 jirka Slavia Prague Senegalese Abdallah Sima, oo diirada u saaran Arsenal iyo West Ham , ayaa doonaya inuu u dhaqaaqo Premier League. (Standard)
Tababaraha Liverpool Jurgen Klopp ayaan fileynin inuu heysto miisaaniyad weyn oo xagaagan ah si uu dib ugu dhiso Reds si uu dib ugula soo wareego Premier League xilli ciyaareedka soo aadan. (iNews)
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee reer France ee Rennes Eduardo Camavinga, oo 18 jir ah, ayaa “dalabyo badan ka helay kooxaha ugu waa weyn” sida laga soo xigtay wakiilkiisa Jonathan Barnett, oo sidoo kale wakiil ka ah Gareth Bale. (Goal)
Khabiirka Ciyaaraha ee Ian Wright ayaa aaminsan in ciyaaryahanka khadka dhexe ee Brighton ee Mali Yves Bissouma, oo 24 jir ah, inuu iska diido Liverpool oo uu ku biiro Manchester United xagaagan. (Metro)
Tababaraha Arsenal Mikel Arteta ayaa doonaya labo daafac oo cusub, qadka dhexe, weeraryahan iyo goolhaye xagaagan. (Goal)
Gunners ayaa xiiseyneysa ciyaaryahanka khadka dhexe ee Sheffield United Sander Berge waxayna weydiisteen indha indheeyayaal cusub inay soo diyaariyaan warqad ku saabsan 23 jirka qadka dhexe ee reer Norway. (Yorkshire Live)
Weeraryahanka Manchester City iyo Jarmalka Lukas Nmecha, oo 22 jir ah, ayaa xiiseynaya kooxaha Premier League iyo Bundesliga sida uu sheegay aabihiis, ka dib xilli ciyaareed qurux badan oo uu la qaatay Anderlecht, halkaasoo uu ku dhaliyay 18 gool 37 kulan. (tbrfootball)
Tottenham ayaa diiday fursad ay kula soo saxiixan laheyd 18 jirka weerarka uga ciyaara kooxda Newcastle Bobby Clark, oo uu dhalay Lee Clark. (Footballinsier247)
Barcelona ayaa xiriir la samaysay Juventus 43 jirka Goolhayaha reer Italy ee Gianluigi Buffon kaas oo ka tagi doona kooxda ka ciyaarta horyaalka Serie A dhamaadka xilli ciyaareedkan. (FootMercato)
Horyaalka Premier League ayaa lagu wadaa inuu ogolaado heshiis cusub oo seddex sano ah oo baahin ah, kaasoo socon doona illaa 2025 isla markaana ku kacaya £ 4.5bn, Sky Sports, BT Sport iyo Amazon Prime. (Mirror)